Ukungabonakali kukukhetha, ukunyaniseka akuyiyo | Martech Zone
Ukubekwa elubala kukhetho, ubunyani abukho
NgoLwesithathu, Septemba 10, 2014 NgeCawa, ngoJulayi 19, 2015 Douglas Karr
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, bendikwimeko entle yokuba ndibelane kakhulu ngobomi bam kwi-intanethi. Ndabelana kakhulu nohambo lwam lokulahleka kobunzima, ndixoxa ngezopolitiko kunye ne-theology, ndabelana ngehlaya elinemibala kunye neevidiyo, kwaye ngoku kutsha nje - ndabelana ngokuhlwa apho bendineziselo ezimbalwa khona. Andikabikho ngokupheleleyo obala kwi-intanethi, kodwa ndiqinisekile.
Oko kubizwa kwam Kuhleni bubunewunewu. Ndisondele kwiminyaka engama-50 ubudala, ndineshishini lam, ndihlala ubomi obumnandi ndingenamnqweno wokuqokelela izigidi. Abahlobo bam bayandithanda ukuba ndibelana kakhulu nge-Intanethi kwaye amashishini endisebenza nawo ayazi kwaye ayandithanda. Abanye abantu oqhelene nabo ngamanye amaxesha abayithandi loo nto… ngokumbombozelela ubudenge nokutya okutyayo. Ndinabahlobo kunye nabaxhasi abaneleyo, nangona kunjalo, andikhathali nokuba abanye bacinga ntoni.
Andizisoli ngokwabelana nantoni endinayo kwi-Intanethi. Ndiziva ndomelele ukuba abanye abantu kufuneka beve ubunzima bam kwaye babone okuhle nokubi kobomi. Ndiyakholelwa ukuba baninzi kuthi abagcina ubuxoki kwi-intanethi. Sifaka iifoto zosapho lwethu olugqibeleleyo, ukutya kwethu okugqibeleleyo, iholide yethu efanelekileyo, indlu yethu egqibeleleyo… kwaye andiqinisekanga ukuba iyanceda. Khawufane ucinge ukuba ngumninimzi osokolayo okanye ongumnini weshishini kwaye ufunda nje uhlaziyo emva kohlaziyo ngendlela umhlaba ococeke ngayo kwaye neshishini lilungile usuku nosuku, umntu unokuzibuza ukuba ingaba bakhutshiwe ngenxa yoku.
My Kuhleni ayizami ukuzama ukonakalisa okanye ukwakha igama lam kwi-intanethi, ndim kuphela. Ndabelana kakhulu kakhulu ukwazisa abanye abantu ukuba ndineentsuku ezimnandi, iintsuku ezimbi, iintsuku ezimbi, kwaye ngamanye amaxesha ezinye iimpumelelo ezincinci endifuna ukuzibhiyozela nabanye… okanye ukusilela endinokukusebenzisa kwiingcebiso. Ndifuna ukunyaniseka ukuze ndibelane kangangoko ndinakho ngaphakathi kwesizathu. (Akukho mntu wabelana ngayo yonke into!)
Xa ndibona ubomi bomntu okwi-intanethi kwaye ndibona kuphela ukugqibelela, ilahla umdla wam kunye nenkolelo yam yokuba kukho ubunyani kumfanekiso abawenzayo. Ndiyakruquka kwaye amazwi abo anefuthe elincinci, ukuba likho. Ukuba bazimisele ukuxoka ngobomi babo kwi-Intanethi, mhlawumbi bazimisele ukundixokisa kwezinye izinto.
Ndiza kongeza ukuba abanye bakhuselekile kuba kufuneka balawule inqanawe exineneyo… ndiyayihlonipha loo nto. Ukuba unyuka kolu shishino kwaye injongo yakho kukuqhubela phambili kwigumbi lebhodi, awunakho ukhetho oluninzi. Siphila kwindawo egweba kakhulu kwaye ukuyila umntu oqeqeshiweyo kunokuba yimfuneko. Kwaye kunokuba yinxalenye yobuntu bakho ukugcina izinto zabucala zisondele kwaye wabelane ngezinto ngokubanzi. Kuwo omabini la matyala, isenokuba yinyani, nangona kunjalo. Ndigxeka kuphela ii-personas zobuxoki.
Amashishini kunqabile ukuba axoxe nge-intanethi engalunganga kwaye andazi nayiphi na ecacileyo. Ngelixa isiqingatha sawo onke amashishini asilele, kunqabile ukuba uve into ekwi-intanethi malunga nokuzabalaza kwequmrhu kude kube lixesha. Kuqoqosho olunzima, lilishwa elo. Ndicinga ukuba kufuneka sabelane ngakumbi malunga nemiceli mngeni kwishishini lethu ukuze iinkampani ezininzi kunganyanzelekanga ukuba zenze iimpazamo ezifanayo esizenzileyo.
Inqaku lam yile:… ukuba wabelana kwinethiwekhi yakho, abathengi kunye nethemba yinto engeyonyani yokuba yonke into igqibelele, awusebenzi ekuhleni kwaye awuzukuthenjwa. Awuyinyani. Ukuba wabelana kakhulu ubeka umngcipheko wokunciphisa amathuba akho kuba abantu bagweba. Kuya kufuneka ufumane uluhlu lokungafihli oluza kukunceda kunye / okanye neshishini lakho. Eyam ivulekile, kodwa eyakho isenokungabi njalo. Qhubeka ngononophelo.
Mhlawumbi kuya kufuneka sibize iqhinga lethu kwi-Intanethi Ukutshintsha kwezinto, isenokuba yinkcazo echanekileyo.
tags: Ukutshintsha kwezintoKuhleni
Ukuthengisa kunye neziBonelelo zeNtengiso zoMatshini oZenzekelayo
Kuhle kwaye kucacile uDoug.
Into elungileyo malunga nokunyaniseka kukufumanisa ukuba ngoobani abahlobo bakho bokwenene.
Amagama obulumko, LindaSherman!